သတင်း – Page4– Shangyimm
Silica Gel Bags တှကေို ဘာလို့ လှငျ့မပဈသငျ့တာလဲ
Posted on February 14, 2020 February 14, 2020 by Shangyi
Silica Gel Bags တွေကို ဘာလို့ လွှင့်မပစ်သင့်တာလဲ
မုန့်ဘူးတွေ၊ ကင်မရာဘူးတွေ၊ ဖိနပ်ဘူးတွေထဲမှာ Silica Gel Bags လို့ခေါ်တဲ့ဂျယ်လီလို အလုံးလေးတွေ အစေ့လေးတွေပါတဲ့ အိတ်လေးကိုတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီအထုပ်လေးတွေကို တွေ့တာနဲ့ အသုံးမလိုလောက်ဘူး အန္တရာယ်ရှိမလား မသိဘူး ဆိုပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီအိတ်လေးတွေက အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ သူဟာ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ်ဖြစ်ပြီး ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဟာ ဘေးနားက အရာဝတ္ထုတွေကို ခြောက်သွေ့နေစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဆိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ မထိတွေ့စေခိုင်းသင့်ပါဘူး။ ကောက်စားလိုက်တာမျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ Silica Gel Bags လို့ခေါ်တဲ့ ဒီအိတ်လေးတွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံက အံ့မခန်းပါပဲ။
၁) ကိုယ့်ရဲ့ Gym ပစ္စည်းအသုံးအဆောင် ထည့်တဲ့အိတ်ထဲကို ထည့်ထားရင် ဗက်တီးရီးယားနဲ့ မှိုပေါက်ဖွားခြင်းမရှိ အောင် ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ အနံ့ဆိုးတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
၂) ဖုန်းကို မတော်တဆ ရေထိသွားရင် ဒီအထုပ်လေးတွေ ကူနိုင်ကယ်နိုင်ပါတယ်။ သူက ဆန်ထဲမှာ ထားတာထက်တောင် ပိုစွမ်းပါသေးတယ်။ ဒီအထုပ်လေးတွေ အများကြီးကို ခွက်ထဲထည့်ပြီး ဖုန်းကို ထားလိုက်ပါ။ စိုထိုင်းမှုကို အလျင်မြန်ဆုံး စုပ်ယူ လိုက်နိုင်ပါတယ်။
၃) ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေကိုလည်း မပျက်စီးစေဖို့ ကယ်တင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေကို ဘူးတစ်ခုထဲမှာ သိမ်းထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီဘူးထဲကို ဒီအိတ်လေးတွေ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံတွေဆေးကွာ ပူးကပ်ပြီး ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄) သူ့ကို ကားမှန်အောက်ခြေ ကားဒတ်ရ်ှဘုတ်ပေါ် တင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း မြူတွေ နှင်းတွေကြောင့် ကားမှန်စိုစွတ်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
၅) ကင်မရာအိတ်ထဲ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ကင်မရာကို ခြောက်သွေ့စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၆) မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားတွေကို ကြာရှည် ထက်မြနေစေချေင်ရင် ဒီအိတ်လေးတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားတွေ ထားတဲ့နေရာမှာ ဒီအိတ်လေးတွေကို ထားပေးမယ်ဆိုရင် အစိုဓာတ်တွေကို စုပ်ယူပေးပြီး မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားတွေ တာရှည်ခံစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၇) ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာ ထည့်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း အနံ့အသက်ကင်းပြီး ခြောက်သွေ့မှု ရှိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈) သူက ရွှေထည် ငွေထည်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အရောင်မလွင့်အောင် ကာကွယ်နိုင်တာမို့ လက်ဝတ်ရတနာ သိမ်းတဲ့နေရာမှာလည်း သူ့ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
၉) သစ်စေ့တွေ မျိုးစေ့တွေကို ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ သိမ်းဆည်းရမယ်ဆိုရင်လည်း လေလုံတဲ့ဘူးထဲမှာ ဒီအိတ်လေးတွေကိုထည့်ပြီးသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၀) စက္ကူနဲ့အခြားသော စာရွက်စာတမ်းတွေကို မှိုတက်ပျက်စီးတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ စာရွက်တွေသိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာ ဒီအထုပ်လေးတွေကိုထားပေးလို့ရပါတယ်။
၁၁) ဆေးဘူးတွေနဲ့ မုန့်ဘူးတွေထဲမှာ ဒီအထုပ်လေးတွေကို ထားသိုတယ်ဆိုတာက အစိုပြန်မှုကိုကာကွယ်စေဖို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့သောက်ဆေးတွေ၊ အားဆေးတွေကို ဒီအထုပ်လေးတွေနဲ့အတူသိမ်းဆည်းလို့ရပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သူ့ကို လွှင့်မပစ်ဘဲ ဘယ်လိုအကျိုးရှိရှိသုံးလို့ရမလဲဆိုတာ သိသွားကြပြီထင်ပါတယ်နော်။
မုနျ့ဘူးတှေ၊ ကငျမရာဘူးတှေ၊ ဖိနပျဘူးတှထေဲမှာ Silica Gel Bags လို့ချေါတဲ့ဂယျြလီလို အလုံးလေးတှေ အစလေ့ေးတှပေါတဲ့ အိတျလေးကိုတှဖေူ့းကွမှာပါ။ ဒီအထုပျလေးတှကေို တှတေ့ာနဲ့ အသုံးမလိုလောကျဘူး အန်တရာယျရှိမလား မသိဘူး ဆိုပွီး လှငျ့ပဈလိုကျကွပါတယျ။
တကယျတမျးမှာတော့ ဒီအိတျလေးတှကေ အရမျးကို အသုံးဝငျပါတယျ။ သူဟာ ဆီလီကှနျဒိုငျအောကျဆိုကျဒျဖွဈပွီး ဆီလီကှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျဟာ ဘေးနားက အရာဝတ်ထုတှကေို ခွောကျသှနေ့စေတော ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ အဆိပျမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကလေးတှကေိုတော့ မထိတှစေ့ခေိုငျးသငျ့ပါဘူး။ ကောကျစားလိုကျတာမြိုး ဖွဈမှာစိုးလို့ပါ။ Silica Gel Bags လို့ချေါတဲ့ ဒီအိတျလေးတှရေဲ့ အသုံးဝငျပုံက အံ့မခနျးပါပဲ။
၁) ကိုယျ့ရဲ့ Gym ပစ်စညျးအသုံးအဆောငျ ထညျ့တဲ့အိတျထဲကို ထညျ့ထားရငျ ဗကျတီးရီးယားနဲ့ မှိုပေါကျဖှားခွငျးမရှိ အောငျ ကာကှယျ ပေးနိုငျပါသေးတယျ။ အနံ့ဆိုးတှကေိုလညျး ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
၂) ဖုနျးကို မတျောတဆ ရထေိသှားရငျ ဒီအထုပျလေးတှေ ကူနိုငျကယျနိုငျပါတယျ။ သူက ဆနျထဲမှာ ထားတာထကျတောငျ ပိုစှမျးပါသေးတယျ။ ဒီအထုပျလေးတှေ အမြားကွီးကို ခှကျထဲထညျ့ပွီး ဖုနျးကို ထားလိုကျပါ။ စိုထိုငျးမှုကို အလငျြမွနျဆုံး စုပျယူ လိုကျနိုငျပါတယျ။
၃) ဓာတျပုံဟောငျးတှကေိုလညျး မပကျြစီးစဖေို့ ကယျတငျနိုငျပါသေးတယျ။ ဓာတျပုံအဟောငျးတှကေို ဘူးတဈခုထဲမှာ သိမျးထားတယျဆိုရငျ အဲဒီဘူးထဲကို ဒီအိတျလေးတှေ ထညျ့ထားလိုကျပါ။ ဓာတျပုံတှဆေေးကှာ ပူးကပျပွီး ပကျြစီးခွငျးမှ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
၄) သူ့ကို ကားမှနျအောကျခွေ ကားဒတျရျှဘုတျပျေါ တငျထားမယျဆိုရငျလညျး မွူတှေ နှငျးတှကွေောငျ့ ကားမှနျစိုစှတျတာမြိုး မဖွဈအောငျ ကာကှယျ ပေးနိုငျပါသေးတယျ။
၅) ကငျမရာအိတျထဲ ထညျ့ထားမယျဆိုရငျလညျး ကငျမရာကို ခွောကျသှစှေ့ာ သိမျးဆညျးထားနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၆) မုတျဆိတျရိတျဓားတှကေို ကွာရှညျ ထကျမွနစေခေငျြေရငျ ဒီအိတျလေးတှကေို သုံးနိုငျပါတယျ။ မုတျဆိတျရိတျဓားတှေ ထားတဲ့နရောမှာ ဒီအိတျလေးတှကေို ထားပေးမယျဆိုရငျ အစိုဓာတျတှကေို စုပျယူပေးပွီး မုတျဆိတျရိတျဓားတှေ တာရှညျခံစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
၇) ခရီးဆောငျအိတျထဲမှာ ထညျ့သှားမယျဆိုရငျလညျး အနံ့အသကျကငျးပွီး ခွောကျသှမှေု့ ရှိနစေမှော ဖွဈပါတယျ။
၈) သူက ရှထေညျ ငှထေညျပစ်စညျးတှကေိုလညျး အရောငျမလှငျ့အောငျ ကာကှယျနိုငျတာမို့ လကျဝတျရတနာ သိမျးတဲ့နရောမှာလညျး သူ့ကို သုံးနိုငျပါတယျ။
၉) သဈစတှေ့ေ မြိုးစတှေ့ကေို ခွောကျခွောကျသှသှေ့ေ့ သိမျးဆညျးရမယျဆိုရငျလညျး လလေုံတဲ့ဘူးထဲမှာ ဒီအိတျလေးတှကေိုထညျ့ပွီးသိမျးဆညျးပေးနိုငျပါတယျ။
၁၀) စက်ကူနဲ့အခွားသော စာရှကျစာတမျးတှကေို မှိုတကျပကျြစီးတာမြိုး မဖွဈစဖေို့ စာရှကျတှသေိမျးဆညျးတဲ့နရောမှာ ဒီအထုပျလေးတှကေိုထားပေးလို့ရပါတယျ။
၁၁) ဆေးဘူးတှနေဲ့ မုနျ့ဘူးတှထေဲမှာ ဒီအထုပျလေးတှကေို ထားသိုတယျဆိုတာက အစိုပွနျမှုကိုကာကှယျစဖေို့ပါ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့သောကျဆေးတှေ၊ အားဆေးတှကေို ဒီအထုပျလေးတှနေဲ့အတူသိမျးဆညျးလို့ရပါတယျ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on Silica Gel Bags တှကေို ဘာလို့ လှငျ့မပဈသငျ့တာလဲ
Posted on January 17, 2020 January 17, 2020 by Shangyi
၁။ ရေများများသောက်ပါ။ (အချိုရည်များ၊ ဆိုဒါများ ရှောင်ပါ)
၂။ နံနက်စာမှာ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ စားပေးပါ။
၃။ Black coffee သာသောက်ပါ။ (နို့နှင့် သကြား မထည့်ပါနှင့်)
၄။ ရေနွေး ပွက်ပွက် လက်ဖက် ခြောက်ခတ်သောက်ပါ။
၅။ တစ်နေ့ ၃ကြိမ်ပဲစားပါ။ တတ်နိုင်လျှင် ၂ကြိမ်ပဲ စားက ပို ကောင်းတယ်။ မကြာခဏ အစာ မစားဘဲနေပါ။
၆။ ညအိပ်ကာနီး အစားမစားသင့်။
၇။ အချိုကဲ၊ အငန်ကဲ၊ ဆီကဲတဲ့ အစားတွေ မစားပါနှင့်။
၈။ ကယ်လိုရီနည်း အစားအစာ တွေသာ ရွေးချယ်စားပါ။
၉။ အစာတစ်ခါစားရင် နည်းနည်းပဲထည့်စားပါ။ ပန်ကန်ပြား ကြီးကြီးနှင့် ထည့်မစားပါနှင့်။
၁၀။ ဗိုက်ဆာလျှင် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေပဲ စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်စားပါ။
၁၁။ လေ့ကျင့်ခန်း နေ့စဉ်နာရီဝက် ချွေးထွက်အောင် မှန်မှန်လုပ်ပါ။
၁။ ရမြေားမြားသောကျပါ။ (အခြိုရညျမြား၊ ဆိုဒါမြား ရှောငျပါ)
၂။ နံနကျစာမှာ ကွကျဥ၊ ဘဲဥ စားပေးပါ။
၃။ Black coffee သာသောကျပါ။ (နို့နှငျ့ သကွား မထညျ့ပါနှငျ့)
၄။ ရနှေေး ပှကျပှကျ လကျဖကျ ခွောကျခတျသောကျပါ။
၅။ တဈနေ့ ၃ကွိမျပဲစားပါ။ တတျနိုငျလြှငျ ၂ကွိမျပဲ စားက ပို ကောငျးတယျ။ မကွာခဏ အစာ မစားဘဲနပေါ။
၆။ ညအိပျကာနီး အစားမစားသငျ့။
၇။ အခြိုကဲ၊ အငနျကဲ၊ ဆီကဲတဲ့ အစားတှေ မစားပါနှငျ့။
၈။ ကယျလိုရီနညျး အစားအစာ တှသော ရှေးခယျြစားပါ။
၉။ အစာတဈခါစားရငျ နညျးနညျးပဲထညျ့စားပါ။ ပနျကနျပွား ကွီးကွီးနှငျ့ ထညျ့မစားပါနှငျ့။
၁၀။ ဗိုကျဆာလြှငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှပေဲ စဉျးစားပွီး ရှေးခယျြစားပါ။
၁၁။ လကေ့ငျြ့ခနျး နစေ့ဉျနာရီဝကျ ခြှေးထှကျအောငျ မှနျမှနျလုပျပါ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on ဘယျမှာ ပိနျဆေးရှိသလဲ
အရိုးစှပျပွုတျလေးသောကျ ၊ ထမငျးပူပူလေးစားရတာ ကွိုကျတဲ့သူတှေ ရှိလားဗြို့
အရိုးစွပ်ပြုတ်လေးသောက် ၊ ထမင်းပူပူလေးစားရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိလားဗျို့
ကြက်စွပ်ပြုတ်၊ ဆိတ်နံရိုးစွပ်ပြုတ်တို့ကို မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ စားရတာ စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ အရသာလည်းရှိ၊ သံပုရာသီးလေးများ ညှစ်လိုက်ရင် ဘာပြောကောင်းမလဲ။ မွှေးမွှေးချဉ်ချဉ်လေး ခံတွင်းကိုတွေ့လို့ ။ နေကောင်းခါစ နလန်ပြန်ထစ အချိန်တွေဆို ဒါတွေကို အဓိကထားစားကြတယ်မလား။ အားပြန်ပြည့်အောင်လို့လေ။ တကယ်ပဲ ဒီလို အရိုးပြုတ်ဟင်းရည် တွေက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးတွေရှိတာလား။
အရိုးပြုတ်ဟင်းရည်တစ်ခုမှာ ဘယ်လိုအာဟာရတွေများ ပါဝင်လဲ။ အရိုးတစ်ခုမှာ အပြင်အရိုး၊ အတွင်း ရိုးတွင်းချဉ်ဆီနဲ့ တစ်ရှူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် အရိုးပြုတ်ဟင်းရည်တစ်ခုသောက်ရင် အဲ့ဒီ ၃ မျိုးက အာဟာရတွေ အကုန်ရနိုင်ပါတယ်။
အရိုး – အရိုးတစ်ခုမှာ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဖော့စဖောရက်စ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ဆာလ်ဖာတို့ပါဝင်တာကြောင့် အရိုးပြုတ်ဟင်းရည်တစ်ခွက်သောက်လိုက်တာနဲ့ ဒီ သတ္တုဓါတ်တွေ အကုန်ရမှာပါ။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ – ဗီတာမင်တွေဖြစ်တဲ့ vitamin A,vitamin K ,တို့အပြင် အိုမီဂါတွေနဲ့ အခြား သတ္တုတွေဖြစ်တဲ့ သံဓါတ်၊ selenium,နဲ့ manganese တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိတ်ရိုး စွပ်ပြုတ်တို့ တို့ အမဲရိုးစွပ်ပြုတ်တို့မှာဆို CLA တောင်ပါဝင်ပါသေးတယ်။Connective tissues – ဒီ တစ်ရှူးထဲမှာ အရိုးနုကျန်းမာဖို့ နဲ့ အရိုးအဆစ် တွေ ရောင်တာနာတာကို သက်သာစေဖို့ နာမည်ကြီး ဖြည့်စွက်အာဟာရဖြစ်တဲ့ glucosamine နဲ့ chondroitin တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရိုး၊ရိုးတွင်းခြင်ဆီနဲ့ Connective tissues တို့ဟာ ကော်လာဂျင် ပရိုတင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် အရိုးစွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်မှာ glycine နဲ့ amino acids တွေလည်း ပါပါသေးတယ်။
ကဲ ဒီလောက် အာဟာရတွေ များပြားစွာပါနေတဲ့အရိုးစွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်က ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲ။ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ များတာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့မှာတော့ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးနော်။ ဒါ့အပြင် အရိုးစွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်ပေးတဲ့ အခြား ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ – အရိုးစွပ်ပြုတ်ထဲမှာပါတဲ့ glycine တွေမှာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေတဲ့အာနိသင်နဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်တဲ့ အာနိသင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် – အရိုးပြုတ်ဟင်းရည်တွေမှာ ကယ်လိုရီ နည်းနည်းပဲ ပါဝင်တဲ့အပြင် ပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တွေက သင့်ကိုဆာလောင်ခြင်းကနေလည်း ကင်းဝေးစေဦးမှာပါ။ Glucosamine နဲ့ chondroitin တို့ရဲ့ အစွမ်းကြောင့် အဆစ်အမြစ်ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီး အဆစ်အမြစ်ရောင်တာကို သူက ကာကွယ်ပေးဦးမှာပါ။ calcium, magnesium နဲ့ phosphorus တို့ ပါဝင်တာကြောင့် အရိုးပြုတ်ဟင်းချိုတစ်ခွက်က ကိုယ်ခန္ဓါကပေါ်က အရိုးတွေ အတွက် ကောင်းကျိုးအထူးပြုမယ်ဆိုတာ မေးစရာတောင်လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ အရိုးစွပ်ပြုတ်မှာပါတဲ့ Glycine ဟာ အိပ်စက်ခြင်းစက်ဝန်းကို အားပေးပြီး ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသေးတယ်။ ဒီလို အရိုးတွေကို သန်မာစေတယ်၊ အဆစ်အမြစ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ချောမွေ့စေတယ်၊ အိပ်စက်ခြင်းကို အားပေးပြီး နဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း တိုးမြင့်စေတဲ့ အရိုးပြုတ်ဟင်းရည်တစ်ခွက်မှာ မသောက်ရင် ဘာကိုများသွားပြီးသောက်ဦးမလဲနော်။
ကွကျစှပျပွုတျ၊ ဆိတျနံရိုးစှပျပွုတျတို့ကို မကွိုကျတဲ့သူရှိမယျ မထငျပါဘူး။ စားရတာ စိမျ့စိမျ့လေးနဲ့ အရသာလညျးရှိ၊ သံပုရာသီးလေးမြား ညှဈလိုကျရငျ ဘာပွောကောငျးမလဲ။ မှေးမှေးခဉျြခဉျြလေး ခံတှငျးကိုတှလေို့။ နကေောငျးခါစ နလနျပွနျထစ အခြိနျတှဆေို ဒါတှကေို အဓိကထားစားကွတယျမလား။ အားပွနျပွညျ့အောငျလို့လေ။ တကယျပဲ ဒီလို အရိုးပွုတျဟငျးရညျ တှကေ ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးတှရှေိတာလား။
အရိုးပွုတျဟငျးရညျတဈခုမှာ ဘယျလိုအာဟာရတှမြေား ပါဝငျလဲ။ အရိုးတဈခုမှာ အပွငျအရိုး၊ အတှငျး ရိုးတှငျးခဉျြဆီနဲ့ တဈရှူးတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာကွောငျ့ အရိုးပွုတျဟငျးရညျတဈခုသောကျရငျ အဲ့ဒီ ၃ မြိုးက အာဟာရတှေ အကုနျရနိုငျပါတယျ။
အရိုး – အရိုးတဈခုမှာ ကယျလျဆီယမျ၊ ဖော့စဖောရကျဈ၊ ဆိုဒီယမျ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျ နဲ့ ပိုတကျဆီယမျ၊ ဆာလျဖာတို့ပါဝငျတာကွောငျ့ အရိုးပွုတျဟငျးရညျတဈခှကျသောကျလိုကျတာနဲ့ ဒီ သတ်တုဓါတျတှေ အကုနျရမှာပါ။ ရိုးတှငျးခွငျဆီ – ဗီတာမငျတှဖွေဈတဲ့ vitamin A,vitamin K ,တို့အပွငျ အိုမီဂါတှနေဲ့ အခွား သတ်တုတှဖွေဈတဲ့ သံဓါတျ၊ selenium,နဲ့ manganese တို့ပါဝငျပါတယျ။ ဆိတျရိုး စှပျပွုတျတို့ တို့ အမဲရိုးစှပျပွုတျတို့မှာဆို CLA တောငျပါဝငျပါသေးတယျ။Connective tissues – ဒီ တဈရှူးထဲမှာ အရိုးနုကနျြးမာဖို့ နဲ့ အရိုးအဆဈ တှေ ရောငျတာနာတာကို သကျသာစဖေို့ နာမညျကွီး ဖွညျ့စှကျအာဟာရဖွဈတဲ့ glucosamine နဲ့ chondroitin တို့ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အရိုး၊ရိုးတှငျးခွငျဆီနဲ့ Connective tissues တို့ဟာ ကျောလာဂငျြ ပရိုတငျးတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာကွောငျ့ အရိုးစှပျပွုတျတဈခှကျမှာ glycine နဲ့ amino acids တှလေညျး ပါပါသေးတယျ။
ကဲ ဒီလောကျ အာဟာရတှေ မြားပွားစှာပါနတေဲ့အရိုးစှပျပွုတျတဈခှကျက ကနျြးမာရေးအပျေါ ဘယျလိုအထောကျ အကူပွုလဲ။ ပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓါတျတှေ မြားတာကွောငျ့ အာဟာရခြို့တဲ့မှာတော့ စိုးရိမျစရာမလိုဘူးနျော။ ဒါ့အပွငျ အရိုးစှပျပွုတျတဈခှကျပေးတဲ့ အခွား ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။
ရောငျရမျးခွငျးကို လြော့ကစြပေါတယျ။ – အရိုးစှပျပွုတျထဲမှာပါတဲ့ glycine တှမှော ရောငျရမျးခွငျးကို လြော့ကစြတေဲ့အာနိသငျနဲ့ ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြတဲ့ အာနိသငျတှပေါဝငျပါတယျ။ ကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ – အရိုးပွုတျဟငျးရညျတှမှော ကယျလိုရီ နညျးနညျးပဲ ပါဝငျတဲ့အပွငျ ပါဝငျတဲ့ ပရိုတငျးဓါတျတှကေ သငျ့ကိုဆာလောငျခွငျးကနလေညျး ကငျးဝေးစဦေးမှာပါ။ Glucosamine နဲ့ chondroitin တို့ရဲ့ အစှမျးကွောငျ့ အဆဈအမွဈကနျြးမာရေးအထူးကောငျးမှနျပွီး အဆဈအမွဈရောငျတာကို သူက ကာကှယျပေးဦးမှာပါ။ calcium, magnesium နဲ့ phosphorus တို့ ပါဝငျတာကွောငျ့ အရိုးပွုတျဟငျးခြိုတဈခှကျက ကိုယျခန်ဓါကပျေါက အရိုးတှေ အတှကျ ကောငျးကြိုးအထူးပွုမယျဆိုတာ မေးစရာတောငျလိုမယျ မထငျပါဘူး။ အရိုးစှပျပွုတျမှာပါတဲ့ Glycine ဟာ အိပျစကျခွငျးစကျဝနျးကို အားပေးပွီး ဦးနှောကျစှမျးဆောငျရညျတှကေို တိုးတကျကောငျးမှနျစပေါသေးတယျ။ ဒီလို အရိုးတှကေို သနျမာစတေယျ၊ အဆဈအမွဈတှရေဲ့ လှုပျရှားမှုကို ခြောမှစေ့တေယျ၊ အိပျစကျခွငျးကို အားပေးပွီး နဲ့ ဦးနှောကျစှမျးဆောငျရညျကိုလညျး တိုးမွငျ့စတေဲ့ အရိုးပွုတျဟငျးရညျတဈခှကျမှာ မသောကျရငျ ဘာကိုမြားသှားပွီးသောကျဦးမလဲနျော။
Posted in သတင်း LeaveaComment on အရိုးစှပျပွုတျလေးသောကျ ၊ ထမငျးပူပူလေးစားရတာ ကွိုကျတဲ့သူတှေ ရှိလားဗြို့
ကနဖော့ရှကျနှငျ့ သှားဖုံးကွှသှားခွရေောငျသူ၊ ဆီးသှားမကောငျးသူမြား၊ အထိုငျမြားခွထေောကျသှေးကြ၊ ခါးကိုကျခါးညောငျး၊ သှေးတိုး။
Posted on December 28, 2019 December 28, 2019 by SHANGYI
နှလုံးကြီး၊ ဆီးကျိတ်ကြီး၊ အမောရောဂါဖြစ်နေသည့် ဖခင်ကြီးအတွက် မေးသူအတွက်..ထပ်မံတင်ပြပါသည်။
ဆီးကောင်း၊ သွေးတိုးကျ၊ အဖောအရောင်ကျ၊ အထိုင်များခြေထောက်သွေးကျ၊ ခါးကိုက်ခါးညောင်း၊ကျောက်ကပ်အပူခို၊ ဆီးသွားမကောင်းသူများ၊ ဆီးကျိတ်ရောဂါ၊ ဆီးကျန်ရောဂါရှိသူများ၊ ဆီးခိုးတက်၍ မျက်စိအားနည်းသူ၊ တိမ်စွဲသူ၊ မျက်စိနီသူများ၊ သွားဖုံးကြွသွားခြေရောင်သူ၊ ခံတွင်းအပူများသူများအတွက်..ဆေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
မန်ကျည်းမှည့်နှင့်ပြုပ် ကြက်သွန်..ဖြူ .နီကြော် ကြွပ်ကြွပ်ဖြင့် သုပ်စားပါ။ လယ်ဘေးချောင်းဘေးအလွန်ပေါသော အပင်လေးများ ဖြစ်ပါသည်။ (နိုင်ငံခြားရောက်နေသူများ..မစားရအလွမ်းပြေ)
နှလုံးကွီး၊ ဆီးကြိတျကွီး၊ အမောရောဂါဖွဈနသေညျ့ ဖခငျကွီးအတှကျ မေးသူအတှကျ..ထပျမံတငျပွပါသညျ။
ဆီးကောငျး၊ သှေးတိုးကြ၊ အဖောအရောငျကြ၊ အထိုငျမြားခွထေောကျသှေးကြ၊ ခါးကိုကျခါးညောငျး၊ကြောကျကပျအပူခို၊ ဆီးသှားမကောငျးသူမြား၊ ဆီးကြိတျရောဂါ၊ ဆီးကနျြရောဂါရှိသူမြား၊ ဆီးခိုးတကျ၍ မကျြစိအားနညျးသူ၊ တိမျစှဲသူ၊ မကျြစိနီသူမြား၊ သှားဖုံးကွှသှားခွရေောငျသူ၊ ခံတှငျးအပူမြားသူမြားအတှကျ..ဆေးပငျဖွဈပါသညျ။
မနျကညျြးမှညျ့နှငျ့ပွုပျ ကွကျသှနျ..ဖွူ .နီကွျော ကွှပျကွှပျဖွငျ့ သုပျစားပါ။ လယျဘေးခြောငျးဘေးအလှနျပေါသော အပငျလေးမြား ဖွဈပါသညျ။ (နိုငျငံခွားရောကျနသေူမြား..မစားရအလှမျးပွေ)
Posted in သတင်း LeaveaComment on ကနဖော့ရှကျနှငျ့ သှားဖုံးကွှသှားခွရေောငျသူ၊ ဆီးသှားမကောငျးသူမြား၊ အထိုငျမြားခွထေောကျသှေးကြ၊ ခါးကိုကျခါးညောငျး၊ သှေးတိုး။
ဗိုက်ပွပြီး လေမလည်သူတွေအတွက် အလွယ်လက်တွေ.ဆေးနည်း။ ဗိုကျပှပွီး လမေလညျသူတှအေတှကျ အလှယျလကျတှေ.ဆေးနညျး။
Posted on December 26, 2019 December 26, 2019 by SHANGYI
ဗိုက်ပူပြီး လေမလည်သူတွေအတွက် ဆေးနည်း
လေ ပွ(ဗိုက်ပွ)ပြီ မအီမသာဖြစ်နေပါက ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်နုလေးများကို အ သုံးပြုပါ။ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်နုလေးတွေကို ရေသန့်သန့်ထဲမှာ ထည့်စိမ်ပါ။
တစ်နာရီ စိမ်ထား‌‌ပေးက ပို၍‌‌ကောင်းပါသည်။ အကယ်၍ အရေးပေါ်သုံးလိုပါ က နာရီဝက် အ နည်းဆုံး စိမ်ထားပေးပြီး သောက်ပေးပါက သက်သာ‌ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ဗိုက်ဖောင်း နေသူတွေအတွက် ၎င်းအရွက်နုများကို ကြိတ်ပြီး ပူနွေးစေရန် မီးဖြင့် အပူသင့်ရုံပေးပြီး ဝမ်းဗိုက်ကို ကျပ်စည်းပေးပါ။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း လေပွခြင်း သက်သာပြီး ဝမ်းပျော့ပျော့သွားပါလိမ့်မည်။
မေတ္တာ များ စွာ ဖြင့် C haw Lay Su
ဗိုကျပူပွီး လမေလညျသူတှအေတှကျ ဆေးနညျး
လေ ပှ(ဗိုကျပှ)ပွီ မအီမသာဖွဈနပေါက ကငျပှနျးခဉျြရှကျနုလေးမြားကို အ သုံးပွုပါ။ ကငျပှနျးခဉျြရှကျနုလေးတှကေို ရသေနျ့သနျ့ထဲမှာ ထညျ့စိမျပါ။
တဈနာရီ စိမျထား‌‌ပေးက ပို၍‌‌ကောငျးပါသညျ။ အကယျ၍ အရေးပျေါသုံးလိုပါ က နာရီဝကျ အ နညျးဆုံး စိမျထားပေးပွီး သောကျပေးပါက သကျသာ‌ပြေောကျကငျးစပေါသညျ။ ဗိုကျဖောငျး နသေူတှအေတှကျ ၎င်းငျးအရှကျနုမြားကို ကွိတျပွီး ပူနှေးစရေနျ မီးဖွငျ့ အပူသငျ့ရုံပေးပွီး ဝမျးဗိုကျကို ကပျြစညျးပေးပါ။ ဝမျးဗိုကျအတှငျး လပှေခွငျး သကျသာပွီး ဝမျးပြော့ပြော့သှားပါလိမျ့မညျ။
မတ်ေတာ မြား စှာ ဖွငျ့ C haw Lay Su
Posted in သတင်း LeaveaComment on ဗိုက်ပွပြီး လေမလည်သူတွေအတွက် အလွယ်လက်တွေ.ဆေးနည်း။ ဗိုကျပှပွီး လမေလညျသူတှအေတှကျ အလှယျလကျတှေ.ဆေးနညျး။
အဆစ်အမြစ်ရောင်တတ်တဲ့သူတွေ ဒါတွေ ရှောင်စားပါ။ အဆဈအမွဈရောငျတတျတဲ့သူတှေ ဒါတှေ ရှောငျစားပါ။
Posted on November 22, 2019 November 22, 2019 by Shangyi
အဆစ်အမြစ်တွေရောင်ရမ်းနာကျင်ပြီး လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိကြမှာပါ။ ထိခိုက်မိလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရောဂါအခံတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်တဲ့ အဆစ်အမြစ်တွေ ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာကို လူတိုင်း မခံစားချင်ကြပါဘူး။
ဒီလို နာကျင်လွန်းတဲ့ အဆစ်အမြစ်ကိုက် ဝေဒနာသက်သာအောင် ဆေးတွေသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေပေမယ့် အရမ်းကြီး မသက်သာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ့်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ။ အဆစ်အမြစ် ရောင်တာကို ပိုဆိုးစေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားနေမိလားပေ့ါ ။
ဆီကြေ်ာမုန့်တွေ၊ တာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေ။
အငန်ဓာတ်ပြင်းပြင်းနဲ့ အရသာမှုန့်တွေ အများကြီးထည့်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ စားလို့တော့ကောင်းပေမယ့် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ သူတို့က ဒုက္ခပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်းကို အားပေးတဲ့ အငန်ဓာတ်နဲ့ အရသာမှုန့်တွေကို လျှော့စားဖို့ လိုပါတယ်။ အသင့်စားသရေစာမုန့်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်က စားကောင်းအောင် ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေပေါ့။
အဆဈအမွဈတှရေောငျရမျးနာကငျြပွီး လမျးတောငျ မလြှောကျနိုငျတဲ့သူတှရှေိကွမှာပါ။ ထိခိုကျမိလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ရောဂါအခံတဈခုခုကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ လမျးတောငျကောငျးကောငျး မလြှောကျနိုငျတဲ့ အဆဈအမွဈတှေ ကိုကျခဲတဲ့ ဝဒေနာကို လူတိုငျး မခံစားခငျြကွပါဘူး။
ဒီလို နာကငျြလှနျးတဲ့ အဆဈအမွဈကိုကျ ဝဒေနာသကျသာအောငျ ဆေးတှသေောကျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျနပေမေယျ့ အရမျးကွီး မသကျသာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျ့စားနတေဲ့အစားအသောကျတှကေို ထညျ့စဉျးစားဖို့လိုလာပါပွီ။ အဆဈအမွဈ ရောငျတာကို ပိုဆိုးစတေဲ့ အစားအသောကျတှကေို စားနမေိလားပေ့ါ ။
ဆွီေကျာမုနျ့တှေ၊ တာရှညျခံအောငျလုပျထားတဲ့ အစားအသောကျတှေ။
အငနျဓာတျပွငျးပွငျးနဲ့ အရသာမှုနျ့တှေ အမြားကွီးထညျ့ထားတဲ့ အစားအသောကျတှဟော စားလို့တော့ကောငျးပမေယျ့ အဆဈအမွဈရောငျရမျးခွငျးဖွဈနတေဲ့သူတှကေိုတော့ သူတို့က ဒုက်ခပေးပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရောငျရမျးခွငျးကို အားပေးတဲ့ အငနျဓာတျနဲ့ အရသာမှုနျ့တှကေို လြှော့စားဖို့ လိုပါတယျ။ ။ အသငျ့စားသရစောမုနျ့တှေ၊ စားသောကျဆိုငျက စားကောငျးအောငျ ပွုပွငျထားတဲ့ အစားအသောကျတှပေေါ့။
ဂြုံမှုနျ့၊ အာလူးနဲ့ ဖွူအောငျ ခြှတျထားတဲ့ ဆနျတို့ဟာ glycemic index မြားတဲ့အစားအသောကျတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ အဝလှနျခွငျး၊ ဆီးခြိုနဲ့ နှလုံးရောဂါတို့ကို ဖွဈစတေဲ့အပွငျ ရောငျရမျးခွငျးကိုလညျး အားပေးတဲ့အစားအသောကျတှပေါ ။ ။
ထုံးစံအတိုငျး ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘာကောငျးကြိုးမှ မပေးတဲ့ ဒီ အရကျနဲ့ ဆေးလိပျဟာ ရောငျရမျးခွငျးကို ပိုဆိုးစတေဲ့အပွငျ အခွား ကနျြးမာရေး ပွဿနာတှကေိုပါ ဖွဈစတောကွောငျ့ ရှောငျသငျတဲ့ ထိပျဆုံးက အရာတှပေါ
Posted in သတင်း LeaveaComment on အဆစ်အမြစ်ရောင်တတ်တဲ့သူတွေ ဒါတွေ ရှောင်စားပါ။ အဆဈအမွဈရောငျတတျတဲ့သူတှေ ဒါတှေ ရှောငျစားပါ။
ဆန်ပုန်းရည် ပြုလုပ်နည်းနှင့် အဖိုးတန်ဆန်ပုန်းရေ သုံးစွဲနည်း(၁၁)မျိုး
Posted on August 21, 2019 August 21, 2019 by SHANGYI
ဆန်ပုန်းရည်ပြုလုပ်နည်းနှင့် အဖိုးတန်ဆန်ပုန်းရေ သုံးစွဲနည်း(၁၁)မျိုး
ဆန်ပုန်းရည်ဟာ လူကိုအကျိုးပြုပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရာရောက်သော အရည်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်း၊ မွန်လူမျိုးများမှာ ဆန်ပုန်းရည်အိုးတည်ပြီး အသုံးပြုတာ တွေ့ရပါတယ်။
-ထမင်းချက်ရန် ဒုတိယဆန်ဆေးရေနှင့် တတိယဆန်ဆေးရေတို့ကို ယူပြီး အိုးသစ်တစ်လုံးတွင် ထည့်ပါ။
-ဆားသင့်ရုံနှင့် သန့်ရှင်းသော ထမင်းကြမ်းအနည်းငယ် ထည့်ပြီး အိုးလုံအောင် ဖုံးထားပါ။
-(၃)ရက်ကျော်လျင် ချဉ်လာပါမည်။ အလျဉ်ရလာပါက မနက်ပိုင်း ဆားနှင့် ထမင်းကြမ်းထည့်ပါက ညနေပိုင်းဆန်ပုန်းရည် ဖြစ်ပါတယ်။
-အိုးသစ်ကို သုံးရခြင်းမှာ ဆန်ပုန်းရည် မပုပ်စေရန်နှင့် အနံ့ဆိုးများ ကင်းစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကန်စွန်းရွက်၊ မုန်လာရွက်၊ အသားငါး၊ ပုဇွန်နှင့် ချဉ်ရည်ချက်ရာတွင် မန်ကျည်းသီးအစား ဆန်ပုန်းရည်ဖြင့် ချက်နိုင်ပါတယ်။ အတို့အမြုပ်များ ပြုတ်ရာမှာလည်း အစာကြေပြီး အလွန်ခံတွင်းလိုက်ပါတယ်။
၂။ သားငါးခုတ်ထစ်ပြီး ဆေးလျှင်လည်း အညှီအကျိ အချွဲပျောက်ပါတယ်။ ရေအစား ဆန်ပုန်းရည် ထည့်ချက်ပါက နူးလွယ်ပါတယ်။ ငါးပိသိပ်ရာမှာလည်း သုံးပါက နူးနပ်မွှေးကြိုင်လှပါတယ်။
၃။ ဆန်ပုန်းရည်(၁)ပိသာမှာ ရှောက်သီးကြီး(၁)လုံးထည့် ရေခန်းအောင် ပြုတ်ပါ။ ရှောက်သီးမှ အစေ့များထုတ်ပြီး ဆားအနည်းငယ်ထည့် နံနက်/ည ကွမ်းသီးလုံးခန့် စားပေးပါက လေထိုးလေအောင့်၊ရင်ဘတ်နာရောဂါများ ပျောက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၄။ ဒါ့အပြင် သွေးဆုံးမီးယပ် ပျောက်စေပြီး မီးဖွားရ လွယ်ကူသက်သာစေပါတယ်။ အချို့က အစာမကြေ လေနာအတွက်ဆန်ပုန်းရည်အိုးတွင် ရှောက်၊ သံပုရာခွံများ ထည့်ကာ သုံးစွဲမှီဝဲကြပါတယ်။
၅။ ဆန်ပုန်းရည်(၁)ပိသာမှာ စမုံမျိုး(၅)ပါး (၅)ပဲသားကို အဝတ်ဖြင့်ထုပ်ပါ။ (၃)ရက်ကျော်လျှင် အကြမ်းပုဂံ(၁)လုံးတွင် သကြားအနည်းငယ် စပါးလင်အနည်းငယ် ထုထောင်းပြီး သောက်ပါက အမျိုးသမီးများ အဖြူဆင်းရောဂါ ပျောက်စေပါတယ်။
၆။ ဆန်ပုန်းရည်အိုးထဲမှ ထမင်းချဉ်ကို ဆယ်ပြီး ရေစစ်ကာ သား၊ ငါး၊ ပုဇွန်၊ ပဲနှင့် ထမင်းကြော်စားပါက အလွန်အရသာရှိပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ အလွန်လိုက်လှပါတယ်။ ထိုထမင်းချဉ်ကို ငရုတ်၊ ကြက်သွန်၊ ဆီ၊ ဆားနှင့်သုပ်စားတာလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်။
၇။ ဆန်ပုန်းရည်ကို မနက်စာမစားမီ အဝသောက်ပါက ဆီးလေကောင်းစေပါတယ်။ အပူဒဏ်၊ အအေးဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါတယ်။ ပန်းလန်းပြီး ဒူလာကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၈။ ကြောင်ပန်းရွက်ကို ဆန်ဆေးရည်နဲ့ပြုတ်ပြီး ကြက်သွန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငါးကျီးခြောက်နှင့် သုပ်စားပါက သူငယ်နာဝမ်းပျက်၊ မီးယပ်ဝမ်းပျက် ပျောက်စေတဲ့အပြင် သကျည်းကိုက်ခြင်း ရောဂါများကို ပျောက်စေပါတယ်။
၉။ လူကြီးသူမများက အိမ်နောက်ဖေး ဆန်ပုန်းရည်တည်ပြီး အိမ်ရှေ့စပါးလင်မွှေး စိုက်ပါက တေ စ္ဆ္ဆ၊ သရဲ၊ ပယောဂများ ကင်းဝေးစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၀။ ဆံသားတွေကောင်းပြီး မဲနက်တောက်ပြောင်စေဖို့ ဆန်ပုန်းရည်ကို ခေါင်းမလျော်မီ နာရီဝက်ကြိုပြီး ဦးရေပြားဆံရင်းထိအောင် လိမ်းပြီး စိမ့်ဝင်စေရန် (၂၀)မိနစ်ခန့် နှပ်ထားပါ။ ပြီးမှရိုးရိုးရေနဲ့ဆေးပြီး တလျော်ကင်ပွန်းခေါင်းလျော်ရည်နဲ့ လျော်ပါ။
၁၁။ ဆန်ပုန်းရည်ဟာ ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပြီး အသားအရေ လှပဝင်းလက်စေလို့ မျက်နှာသန့်ဆေးရည်၊အရေပြားလှဆေးရည်အဖြစ် မနက်ပိုင်းနဲ့ ညပိုင်း ဆေးပေး၊ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုလက်စွဲ သုံးလာကြတဲ့ ဆန်ပုန်းရေရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို မှတ်သားပြီး အလေအလွင့်မဖြစ်စေပဲ ငွေမကုန်တဲ့ ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရေးသားမျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဆနျပုနျးရညျပွုလုပျနညျးနှငျ့ အဖိုးတနျဆနျပုနျးရေ သုံးစှဲနညျး(၁၁)မြိုး
ဆနျပုနျးရညျဟာ လူကိုအကြိုးပွုပွီး ကနျြးမာရေးအတှကျ အလှနျအရာရောကျသော အရညျတဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။ ရှမျး၊ မှနျလူမြိုးမြားမှာ ဆနျပုနျးရညျအိုးတညျပွီး အသုံးပွုတာ တှရေ့ပါတယျ။
-ထမငျးခကျြရနျ ဒုတိယဆနျဆေးရနှေငျ့ တတိယဆနျဆေးရတေို့ကို ယူပွီး အိုးသဈတဈလုံးတှငျ ထညျ့ပါ။
-ဆားသငျ့ရုံနှငျ့ သနျ့ရှငျးသော ထမငျးကွမျးအနညျးငယျ ထညျ့ပွီး အိုးလုံအောငျ ဖုံးထားပါ။
-(၃)ရကျကြျောလငျြ ခဉျြလာပါမညျ။ အလဉျြရလာပါက မနကျပိုငျး ဆားနှငျ့ ထမငျးကွမျးထညျ့ပါက ညနပေိုငျးဆနျပုနျးရညျ ဖွဈပါတယျ။
-အိုးသဈကို သုံးရခွငျးမှာ ဆနျပုနျးရညျ မပုပျစရေနျနှငျ့ အနံ့ဆိုးမြား ကငျးစရေနျဖွဈပါတယျ။
၁။ ကနျစှနျးရှကျ၊ မုနျလာရှကျ၊ အသားငါး၊ ပုဇှနျနှငျ့ ခဉျြရညျခကျြရာတှငျ မနျကညျြးသီးအစား ဆနျပုနျးရညျဖွငျ့ ခကျြနိုငျပါတယျ။ အတို့အမွုပျမြား ပွုတျရာမှာလညျး အစာကွပွေီး အလှနျခံတှငျးလိုကျပါတယျ။
၂။ သားငါးခုတျထဈပွီး ဆေးလြှငျလညျး အညှီအကြိ အခြှဲပြောကျပါတယျ။ ရအေစား ဆနျပုနျးရညျ ထညျ့ခကျြပါက နူးလှယျပါတယျ။ ငါးပိသိပျရာမှာလညျး သုံးပါက နူးနပျမှေးကွိုငျလှပါတယျ။
၃။ ဆနျပုနျးရညျ(၁)ပိသာမှာ ရှောကျသီးကွီး(၁)လုံး ထညျ့ ရခေနျးအောငျ ပွုတျပါ။ ရှောကျသီးမှ အစမြေ့ားထုတျပွီး ဆားအနညျးငယျထညျ့ နံနကျ/ည ကှမျးသီးလုံးခနျ့ စားပေးပါက လထေိုးလအေောငျ့၊ရငျဘတျနာရောဂါမြား ပြောကျစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၄။ ဒါ့အပွငျ သှေးဆုံးမီးယပျ ပြောကျစပွေီး မီးဖှားရ လှယျကူသကျသာစပေါတယျ။ အခြို့က အစာမကွေ လနောအတှကျဆနျပုနျးရညျအိုးတှငျ ရှောကျ၊ သံပုရာခှံမြား ထညျ့ကာ သုံးစှဲမှီဝဲကွပါတယျ။
၅။ ဆနျပုနျးရညျ(၁)ပိသာမှာ စမုံမြိုး(၅)ပါး (၅)ပဲသားကို အဝတျဖွငျ့ထုပျပါ။ (၃)ရကျကြျောလြှငျ အကွမျးပုဂံ(၁)လုံးတှငျ သကွားအနညျးငယျ စပါးလငျအနညျးငယျ ထုထောငျးပွီး သောကျပါက အမြိုးသမီးမြား အဖွူဆငျးရောဂါ ပြောကျစပေါတယျ။
၆။ ဆနျပုနျးရညျအိုးထဲမှ ထမငျးခဉျြကို ဆယျပွီး ရစေဈကာ သား၊ ငါး၊ ပုဇှနျ၊ ပဲနှငျ့ ထမငျးကွျောစားပါက အလှနျအရသာရှိပါတယျ။ ရနှေေးကွမျးနဲ့ အလှနျလိုကျလှပါတယျ။ ထိုထမငျးခဉျြကို ငရုတျ၊ ကွကျသှနျ၊ ဆီ၊ ဆားနှငျ့သုပျစားတာလညျးအလှနျကောငျးပါတယျ။
၇။ ဆနျပုနျးရညျကို မနကျစာမစားမီ အဝသောကျပါက ဆီးလကေောငျးစပေါတယျ။ အပူဒဏျ၊ အအေးဒဏျ ခံနိုငျရညျရှိစပေါတယျ။ ပနျးလနျးပွီး ဒူလာကောငျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၈။ ကွောငျပနျးရှကျကို ဆနျဆေးရညျနဲ့ပွုတျပွီး ကွကျသှနျ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငါးကြီးခွောကျနှငျ့ သုပျစားပါက သူငယျနာဝမျးပကျြ၊ မီးယပျဝမျးပကျြ ပြောကျစတေဲ့အပွငျ သကညျြးကိုကျခွငျး ရောဂါမြားကို ပြောကျစပေါတယျ။
၉။ လူကွီးသူမမြားက အိမျနောကျဖေး ဆနျပုနျးရညျတညျပွီး အိမျရှစေ့ပါးလငျမှေး စိုကျပါက တေ စ်ဆ်ဆ၊ သရဲ၊ ပယောဂမြား ကငျးဝေးစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၁၀။ ဆံသားတှကေောငျးပွီး မဲနကျတောကျပွောငျစဖေို့ ဆနျပုနျးရညျကို ခေါငျးမလြျောမီ နာရီဝကျကွိုပွီး ဦးရပွေားဆံရငျးထိအောငျ လိမျးပွီး စိမျ့ဝငျစရေနျ (၂၀)မိနဈခနျ့ နှပျထားပါ။ ပွီးမှရိုးရိုးရနေဲ့ဆေးပွီး တလြျောကငျပှနျးခေါငျးလြျောရညျနဲ့ လြျောပါ။
၁၁။ ဆနျပုနျးရညျဟာ ခြှေးပေါကျမြားကို ကဉျြးစပွေီး အသားအရေ လှပဝငျးလကျစလေို့ မကျြနှာသနျ့ဆေးရညျ၊အရပွေားလှဆေးရညျအဖွဈ မနကျပိုငျးနဲ့ ညပိုငျး ဆေးပေး၊ လိမျးပေးခွငျးဖွငျ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုလကျစှဲ သုံးလာကွတဲ့ဆနျပုနျးရရေဲ့ ကောငျးကြိုးတှကေို မှတျသားပွီး အလအေလှငျ့မဖွဈစပေဲ ငှမေကုနျတဲ့ ဆေးအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျစရေနျ ရေးသားမြှဝလေိုကျပါတယျ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on ဆန်ပုန်းရည် ပြုလုပ်နည်းနှင့် အဖိုးတန်ဆန်ပုန်းရေ သုံးစွဲနည်း(၁၁)မျိုး
Posted on July 24, 2019 July 24, 2019 by SHANGYI
ဒို့လည်း ကျင့်ခဲ့တုန်းက ပုတီးနဲ့ ကျင့်ခဲ့ရတာ။ ပုတီးကျတော့ လက်ကလည်း ကြမ်းသဗျ၊ ပုတီးကလည်း ကြမ်းသဗျ။အကြမ်းနှစ်ခု ထိတော့ ဒီနေရာ အသိကပ်လို့ လွယ်သပေါ့။ ဒီဂုဏ်တော်စိပ်လို့ ဘာအကျိုးရမယ်၊ ညာအကျိုးရမယ်လို့ မမျှော်နဲ့။ လိုချင်တာက မတွေးဖြစ်ဖို့ပဲ။
ကိုယ့်ဘက်က အမှတ်များနေလို့ရှိရင် အတွေးနောက်ဆုတ်မှာပဲ။ ကျုပ်တုန်းကတော့ ဘာဂုဏ်တော်စိပ်လို့ ဘာသိဒ္ဓိကြီး၊ညာသိဒ္ဓိကြီး မလိုက်ဘူး။ တစ်လုံးထိ တစ်လုံးသိပဲ။ ကျုပ်ရဲ့ ပုတီးစိပ်တဲ့ ပန်းတိုင်က “ငါ့ စိတ်ကလေး ငါ့လက်ထဲ ရောက်ရမယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကလေး ကိုယ့်လက်ထဲရောက်ရင် ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာ ထားလို့ ရပြီပေါ့ဗျ။ ကျုပ်တုန်းက ပုတီးမပါလည်းပဲ လက်ညိုးနဲ့ လက်မ ပွတ်ပြီးတော့ ‘ အရဟံသိဒ္ဓိ ‘ ‘ အရဟံသိဒ္ဓိ ‘ လို့ ပွားနေတာ။
လက်ညိုးနဲ့လက်မက မထင်ရှားဘူးလား? … ထင်ရှားတယ်။ ကျုပ်က အဲ့လိုအသိလေး ကပ်ခဲ့တာ။ ရထားစီးစီး၊ ကားစီးစီး၊ ခြေလျှင်ကြွကြွ အဲ့လိုကျင့်ယူခဲ့ရတာဗျ။ တစ်မှတ်မိနေရင် တစ်တွေး နောက်ဆုတ်မှာပဲ။ ဆယ်မှတ်မိရင် ဆယ်တွေးနောက်ဆုတ်မှာပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်သွားမလုပ်နဲ့၊ ကိုယ့်ဘက်ကသာ အားကောင်းအောင်လုပ်။
” မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောဘုရားကွီး၏ ပုတီးစိပျနညျး “
ဒို့လညျး ကငျြ့ခဲ့တုနျးက ပုတီးနဲ့ ကငျြ့ခဲ့ရတာ။ ပုတီးကတြော့ လကျကလညျး ကွမျးသဗြ၊ ပုတီးကလညျး ကွမျးသဗြ။အကွမျးနှဈခု ထိတော့ ဒီနရော အသိကပျလို့ လှယျသပေါ့။ ဒီဂုဏျတျောစိပျလို့ ဘာအကြိုးရမယျ၊ ညာအကြိုးရမယျလို့ မမြှျောနဲ့။ လိုခငျြတာက မတှေးဖွဈဖို့ပဲ။
ကိုယျ့ဘကျက အမှတျမြားနလေို့ရှိရငျ အတှေးနောကျဆုတျမှာပဲ။ ကြုပျတုနျးကတော့ ဘာဂုဏျတျောစိပျလို့ ဘာသိဒ်ဓိကွီး၊ညာသိဒ်ဓိကွီး မလိုကျဘူး။ တဈလုံးထိ တဈလုံးသိပဲ။ ကြုပျရဲ့ ပုတီးစိပျတဲ့ ပနျးတိုငျက “ငါ့ စိတျကလေး ငါ့လကျထဲ ရောကျရမယျ။ ကိုယျ့စိတျကလေး ကိုယျ့လကျထဲရောကျရငျ ကိုယျထားခငျြတဲ့နရော ထားလို့ ရပွီပေါ့ဗြ။ ကြုပျတုနျးက ပုတီးမပါလညျးပဲ လကျညိုးနဲ့ လကျမ ပှတျပွီးတော့ ‘ အရဟံသိဒ်ဓိ ‘ ‘ အရဟံသိဒ်ဓိ ‘ လို့ ပှားနတော။
လကျညိုးနဲ့လကျမက မထငျရှားဘူးလား? … ထငျရှားတယျ။ ကြုပျက အဲ့လိုအသိလေး ကပျခဲ့တာ။ ရထားစီးစီး၊ ကားစီးစီး၊ ခွလြှေငျကွှကွှ အဲ့လိုကငျြ့ယူခဲ့ရတာဗြ။ တဈမှတျမိနရေငျ တဈတှေး နောကျဆုတျမှာပဲ။ ဆယျမှတျမိရငျ ဆယျတှေးနောကျဆုတျမှာပဲ။ ဘယျသူ့ကိုမှ ရနျသှားမလုပျနဲ့၊ ကိုယျ့ဘကျကသာ အားကောငျးအောငျလုပျ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပုတီးစိပ်နည်း
Posted on July 7, 2019 July 7, 2019 by SHANGYI
အချိုမှုန့်ရေရှည် မှန်မှန်စားသွားရင် ဒီလောက် အန္တရာယ် များပါတယ်ဆိုတဲ့ အချိုမှုန့်ဆိုတာ Monosodium glutamate (MSG) လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Glutamic Acid လို့ခေါ်တဲ့ Amino Acid တစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး စားစရာထဲ ထည့်လိုက်ရင် Free Glumate တွေ အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားကာ အစားအသောက်တွေရဲ့ အရသာကို ဓာတုနည်းနဲ့ လျှာပေါ်မှာ ဆပွားတိုးပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုမှုန့်ဟာ ဟင်းခတ်ပစ္စည်းတစ်ခု ဟုတ်ပါသလား.? ပုံမှန်သုံးသင့်တဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်ခု လုံးဝမဟုတ်ပါ။ နည်းနည်းစားစား များများစားစား ရေရှည်စားရင် အန္တရာယ်ကတော့ ရှိတာပါပဲလို့ ပညာရှင်များက ပြောကြားပါတယ်။
Good Manufacturing Practice (GMP) လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ကောင်း (GMP စနစ်) ရဲ့ အစားအသောက်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အချိုမှုန့် လုံးဝ မပါပါဘူး။အချိုမှုန့်ကို ရေရှည်ပုံမှန် စားသုံးသွားရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ
(၁) ဆီးချို မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း (Insulin) ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာ အနှောင့်အယှက်တစ်ရပ် ဖြစ်စေလို့ ဆီးချိုဖြစ်စေဖို့ ကောင်းကောင်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
(၂) အစာ အလွန်အကျွံ စားချင်စိတ်ကို တိုးပွားဖြစ်ပေါ်စေသလို အဝလွန်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ဟော်မုန်းများကိုပါ ပိတ်ဆို့လို့ အဝလွန်ခြင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်း ရောက်လာရင် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ်စတဲ့ အဖော်အပေါင်းတွေပါ ပါလာပါလိမ့်မယ်။
(၃) ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို မြန်မြန် ပျက်စီးယိုယွင်းစေပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကို အရွယ်မတိုင်ခင်ပျောက်ဆုံးစေပြီး မေ့တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေဖို့ အလားအလာ အရမ်းများစေပါတယ်။ အချိုမှုန့်ကို မွေးကင်းစကတည်းကနေ စပြီးစားတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဉာဏ်ရည်ပိုင်း ယုတ်လျော့မှု ရှိတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၄) ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ အချိုမှုန့် သုံးစွဲမှုကို လုံးဝဖြတ်တောက်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အမျိုးသားအဆင့် ကြေငြာချက်တွေ ဥပဒေတွေ အလန့်တကြား ထုတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဂျာမန်ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေ ဘာတွေ့ရလို့လဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ သိပါသလား။ အချိုမှုန့် စားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း စွမ်းရည်ကျဆင်း၍ မတိုးတော့ခြင်း (Insulin-resistant) မွေးရာပါ ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် ဆီးချိုဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆီးချိုဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မားနေတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ အချိုမှုန့်စားတဲ့ အကျင့်ကြောင့် မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ medulla oblongata, thalamus, or hypothalamus ဆိုတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ရှိတဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
ဒီနေရာတွေဟာ အစားအသောက် စားချင်စိတ်ကို အဓိက ထိန်းချုပ်တဲ့ ဦးနှောက်ဧရိယာတွေ ဖြစ်လို့ ဒီလို ကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် အစားအသောက် အလွန်အကျွံစားတဲ့ အကျင့်ရှိကာ အဝလွန်ပြီး ရောဂါတွေ ထူစေတတ်တာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လေ့လာတွေ့ရှိ ထားပါတယ်။(ဒါဟာ အချို့မှုန့်ကပေးတဲ့အမျိုးသား ကျန်းမာရေး/ လူမှုရေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (National Health/Social Burden) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိုမှုန့် ဝယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့အတွက် နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး အကျိုးရှိစေမယ့် တခြားအရာတွေဝယ်ယူဖို့ နိုင်ငံခြားငွေ လျော့စေလို့ တိုင်းပြည်အတွက်လဲ နစ်နာပါတယ်)
(၆) မျိုးပွားစွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်း၊ သားသမီးရနိုင်စွမ်း ကျဆင်းခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။Chinese Restaurant Syndrome ခေါ် တရုတ်စားတော်ဆက်ရောဂါစု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါစုဟာအချိုမှုန့် လွန်ကဲစွာ ပါတဲ့ အစားအသောက် စားပြီးပြီးချင်းမှာ မျက်နှာ၊ လည်ပင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာအနီစက်တွေ ထွက်လာခြင်း၊ ခေါင်းအရမ်းထိုးကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ မျက်နှာမှာ တင်းကြပ်နေတယ်လို့ ခံစားရတတ်ခြင်း၊ မေးလှုပ် ပါးစပ်ဖွင့်ရတာ လေးခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း စတာတွေ ခံစားရတတ်တဲ့ အချိုမှုန့်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) ပန်ကရိယခေါ် မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ရောဂါ အပါအဝင် ကိုယ်တွင်းကလီစာ တစ်ခုခု ယောင်ယမ်းတဲ့ ရောဂါ ရှိနေသူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ စာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အထူးရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။
(၈) လူအများစုက ဆားကအငန် အချိုမှုန့်က အပေါ့ဆိုပြီး တလွဲမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆားထည့်လွန်လို့ ငန်သွားရင် အချိုမှုန့်များများ ထပ်ထည့်ပါတယ်။ အမှန်က ဆားက Sodium chloride၊အချိုမှုန့်က Monosodium glutamate ဖြစ်လို့ နှစ်ခုလုံး ဆိုဒီယမ် (Sodium) ဆားဓာတ်ဖြစ်ကာ နှစ်ခု ပြိုင်စားသုံးရင် သွေးတွင်းဆိုဒီယမ် မြင့်တက်မှု အရမ်းများလာစေကာ သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်လိုသူများနဲ့ ရှိသူများဟာ အချိုမှုန့်ကို အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
အချိုမှုန့် စွဲလမ်းနေခြင်းကို ဘယ်လို လျှော့ချ အမြစ်ဖြတ်ကြမလဲ-
(၁) လျှော့ချသုံးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ အချိုမှုန့်ဟာ အသားတွေရဲ့ အရသာကိုသာ မြှင့်တင်ပေးတာ ဖြစ်လို့ အသီးအနှံတွေမှာ လုံးဝမသုံးပါနဲ့။
(၂) ယေဘုယျလမ်းညွှန် (General Guideline) အရ ပြောရရင် အစားအသောက် တစ်ကီလို(၂.၂ပေါင်) ကို အချိုမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ တစ်ဇွန်းထက် ပိုမသုံးပါနဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ အန္တရာယ် နည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၃) ရယ်ဒီမိတ် အစားအသောက်တွေ အားလုံးနီးပါးမှာ အချိုမှုန့် ပါပြီးသားဆိုတာ သတိထားပါ။ဘယ်တော့မှ အချိုမှုန့် ထပ်မထည့်ပါနဲ့။
(၄) ရယ်ဒီမိတ် စားစရာတွေ ဝယ်ရင် လေဘယ်လ်ပေါ်မှာ ပါတဲ့ အချိုမှုန့်ပါဝင်မှု ပမာဏကို ရှာဖွေပါ။အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အစားအသောက်တံဆိပ်တွေ အားလုံးရဲ့ ပါဝင်ဖက်ပစ္စည်းစာရင်း (Ingredient List) ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ အချိုမှုန့် တကယ်သုံးထားရင် သုံးထားကြောင်း ပမာဏ အတိအကျ ပါပါတယ်။
(၅) ရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေ (ဥပမာ ပုစွန်ခြောက်၊ ငါးပိ စတာတွေ) ကို ပြန်လည်အစားထိုး သုံးသင့်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် ဘိုးဘွားများဟာ ထွားကျိုင်းသန်မာ ရောဂါကင်းခဲ့တာ အချိုမှုန့် မစားခဲ့ကြတာလည်း ပါပါတယ်။
အခြိုမှုနျ့ရရှေညျ မှနျမှနျစားသှားရငျ ဒီလောကျ အန်တရာယျ မြားပါတယျဆိုတဲ့ အခြိုမှုနျ့ဆိုတာ Monosodium glutamate (MSG) လို့ချေါတဲ့ ဒွပျပေါငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ Glutamic Acid လို့ချေါတဲ့ Amino Acid တဈမြိုး ပါဝငျပွီး စားစရာထဲ ထညျ့လိုကျရငျ Free Glumate တှေ အဖွဈကို ပွောငျးလဲသှားကာ အစားအသောကျတှရေဲ့ အရသာကို ဓာတုနညျးနဲ့ လြှာပျေါမှာ ဆပှားတိုးပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ အခြိုမှုနျ့ဟာ ဟငျးခတျပစ်စညျးတဈခု ဟုတျပါသလား.? ပုံမှနျသုံးသငျ့တဲ့ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျတဈခု လုံးဝမဟုတျပါ။ နညျးနညျးစားစား မြားမြားစားစား ရရှေညျစားရငျ အန်တရာယျကတော့ ရှိတာပါပဲလို့ ပညာရှငျမြားက ပွောကွားပါတယျ။
Good Manufacturing Practice (GMP) လို့ချေါတဲ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ထုတျလုပျမှု စနဈကောငျး (GMP စနဈ) ရဲ့ အစားအသောကျတှေ ထုတျလုပျတဲ့ နရောမှာ အခြိုမှုနျ့ လုံးဝ မပါပါဘူး။အခြိုမှုနျ့ကို ရရှေညျပုံမှနျ စားသုံးသှားရငျ ဘာဆိုးကြိုးတှေ ရှိလာနိုငျမလဲ
(၁) ဆီးခြို မဖွဈအောငျ ထိနျးသိမျးပေးတဲ့ အငျဆူလငျဟျောမုနျး (Insulin) ရဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာမှာ အနှောငျ့အယှကျတဈရပျ ဖွဈစလေို့ ဆီးခြိုဖွဈစဖေို့ ကောငျးကောငျး အထောကျအကူပွုပါတယျ။
(၂) အစာ အလှနျအကြှံ စားခငျြစိတျကို တိုးပှားဖွဈပျေါစသေလို အဝလှနျခွငျးကို တားဆီးပေးတဲ့ဟျောမုနျးမြားကိုပါ ပိတျဆို့လို့ အဝလှနျခွငျးကို ဖိတျချေါပါတယျ။ အဝလှနျခွငျး ရောကျလာရငျ သှေးတိုး၊ ဆီးခြို၊ နှလုံးသှေးကွောပိတျစတဲ့ အဖျောအပေါငျးတှပေါ ပါလာပါလိမျ့မယျ။
(၃) ဦးနှောကျဆဲလျတှကေို မွနျမွနျ ပကျြစီးယိုယှငျးစပေါတယျ။ မှတျဉာဏျကို အရှယျမတိုငျခငျပြောကျဆုံးစပွေီး မတေ့တျတဲ့ ရောဂါတှေ ဖွဈစဖေို့ အလားအလာ အရမျးမြားစပေါတယျ။ အခြိုမှုနျ့ကို မှေးကငျးစကတညျးကနေ စပွီးစားတဲ့ ကလေးတှမှော ဉာဏျရညျပိုငျး ယုတျလြော့မှု ရှိတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။
(၄) ဂြာမနီနိုငျငံမှာ အခြိုမှုနျ့ သုံးစှဲမှုကို လုံးဝဖွတျတောကျရှောငျကွဉျဖို့ အမြိုးသားအဆငျ့ ကွငွောခကျြတှေ ဥပဒတှေေ အလနျ့တကွား ထုတျခဲ့ရဖူးပါတယျ။ ဂြာမနျကနျြးမာရေး ပညာရှငျတှေ ဘာတှရေ့လို့လဲ ဆိုတာ စာဖတျသူတို့ သိပါသလား။ အခြိုမှုနျ့ စားတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျတှေ မှေးလာတဲ့ ကလေးတှဟော အငျဆူလငျဟျောမုနျး စှမျးရညျကဆြငျး၍ မတိုးတော့ခွငျး (Insulin-resistant) မှေးရာပါ ဖွဈလာတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီကလေးတှဟော ကွီးလာရငျ ဆီးခြိုဖွဈဖို့ သခြောသလောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြဟာ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှရေဲ့ ဆီးခြိုဖွဈပှားနှုနျး မွငျ့မားနတေဲ့ အခကျြတှထေဲက တဈခု အပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။
(၅) နောကျတဈခကျြက ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှေ အခြိုမှုနျ့စားတဲ့ အကငျြ့ကွောငျ့ မှေးလာတဲ့ ကလေးတှရေဲ့ medulla oblongata, thalamus, or hypothalamus ဆိုတဲ့ ဦးနှောကျ အစိတျအပိုငျးတှမှော ရှိတဲ့ အာရုံကွောဆဲလျတှကေို ပကျြစီးစပေါတယျ။
ဒီနရောတှဟော အစားအသောကျ စားခငျြစိတျကို အဓိက ထိနျးခြုပျတဲ့ ဦးနှောကျဧရိယာတှေ ဖွဈလို့ ဒီလို ကလေးတှဟော ကွီးလာရငျ အစားအသောကျ အလှနျအကြှံစားတဲ့ အကငျြ့ရှိကာ အဝလှနျပွီး ရောဂါတှေ ထူစတေတျတာ ကမ်ဘာတဈဝနျး လလေ့ာတှရှေိ့ ထားပါတယျ။(ဒါဟာ အခြို့မှုနျ့ကပေးတဲ့အမြိုးသား ကနျြးမာရေး/ လူမှုရေး ဝနျထုပျဝနျပိုး (National Health/Social Burden) ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အခြိုမှုနျ့ ဝယျယူတငျသှငျးရတဲ့အတှကျ နိုငျငံနဲ့လူမြိုး အကြိုးရှိစမေယျ့ တခွားအရာတှဝေယျယူဖို့ နိုငျငံခွားငှေ လြော့စလေို့ တိုငျးပွညျအတှကျလဲ နဈနာပါတယျ)
(၆) မြိုးပှားစှမျးရညျ ကဆြငျးခွငျး၊ သားသမီးရနိုငျစှမျး ကဆြငျးခွငျးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။Chinese Restaurant Syndrome ချေါ တရုတျစားတျောဆကျရောဂါစု ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒီရောဂါစုဟာအခြိုမှုနျ့ လှနျကဲစှာ ပါတဲ့ အစားအသောကျ စားပွီးပွီးခငျြးမှာ မကျြနှာ၊ လညျပငျးနဲ့ တဈကိုယျလုံးမှာအနီစကျတှေ ထှကျလာခွငျး၊ ခေါငျးအရမျးထိုးကိုကျခွငျး၊ ခေါငျးမူးခွငျး၊ မကျြနှာမှာ တငျးကွပျနတေယျလို့ ခံစားရတတျခွငျး၊ မေးလှုပျ ပါးစပျဖှငျ့ရတာ လေးခွငျး၊ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး၊ ခါးနာခွငျး စတာတှေ ခံစားရတတျတဲ့ အခြိုမှုနျ့နဲ့ ဓာတျမတညျ့တဲ့ ရောဂါ ဖွဈပါတယျ။
(၇) ပနျကရိယချေါ မုနျ့ခြိုအိတျရောငျရောဂါ အပါအဝငျ ကိုယျတှငျးကလီစာ တဈခုခု ယောငျယမျးတဲ့ ရောဂါ ရှိနသေူတှေ၊ သကျကွီးရှယျအိုတှေ၊ စာသငျကွားနတေဲ့ ကြောငျးသားကြောငျးသူတှေ အထူးရှောငျကွဉျ သငျ့ပါတယျ။
(၈) လူအမြားစုက ဆားကအငနျ အခြိုမှုနျ့က အပေါ့ဆိုပွီး တလှဲမှတျယူထားကွပါတယျ။ ဒီတော့ ဆားထညျ့လှနျလို့ ငနျသှားရငျ အခြိုမှုနျ့မြားမြား ထပျထညျ့ပါတယျ။ အမှနျက ဆားက Sodium chloride၊အခြိုမှုနျ့က Monosodium glutamate ဖွဈလို့ နှဈခုလုံး ဆိုဒီယမျ (Sodium) ဆားဓာတျဖွဈကာ နှဈခု ပွိုငျစားသုံးရငျ သှေးတှငျးဆိုဒီယမျ မွငျ့တကျမှု အရမျးမြားလာစကော သှေးတိုးရောဂါကို ဖွဈစပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သှေးတိုးရောဂါ ကာကှယျလိုသူမြားနဲ့ ရှိသူမြားဟာ အခြိုမှုနျ့ကို အထူးရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။
အခြိုမှုနျ့ စှဲလမျးနခွေငျးကို ဘယျလို လြှော့ခြ အမွဈဖွတျကွမလဲ-
(၁) လြှော့ခသြုံးခွငျးဖွငျ့ စတငျပါ။ အခြိုမှုနျ့ဟာ အသားတှရေဲ့ အရသာကိုသာ မွှငျ့တငျပေးတာ ဖွဈလို့ အသီးအနှံတှမှော လုံးဝမသုံးပါနဲ့။
(၂) ယဘေုယလြမျးညှနျ (General Guideline) အရ ပွောရရငျ အစားအသောကျ တဈကီလို(၂.၂ပေါငျ) ကို အခြိုမှုနျ့ လကျဖကျရညျဇှနျးနဲ့ တဈဇှနျးထကျ ပိုမသုံးပါနဲ့။ ဒါဆိုရငျတော့ အန်တရာယျ နညျးတယျလို့ သိရပါတယျ။
(၃) ရယျဒီမိတျ အစားအသောကျတှေ အားလုံးနီးပါးမှာ အခြိုမှုနျ့ ပါပွီးသားဆိုတာ သတိထားပါ။ဘယျတော့မှ အခြိုမှုနျ့ ထပျမထညျ့ပါနဲ့။
(၄) ရယျဒီမိတျ စားစရာတှေ ဝယျရငျ လဘေယျလျပျေါမှာ ပါတဲ့ အခြိုမှုနျ့ပါဝငျမှု ပမာဏကို ရှာဖှပေါ။အဆငျ့အတနျးရှိတဲ့ အစားအသောကျတံဆိပျတှေ အားလုံးရဲ့ ပါဝငျဖကျပစ်စညျးစာရငျး (Ingredient List) ရဲ့ အောကျဆုံးမှာ အခြိုမှုနျ့ တကယျသုံးထားရငျ သုံးထားကွောငျး ပမာဏ အတိအကြ ပါပါတယျ။
(၅) ရိုးရာ ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျတှေ (ဥပမာ ပုစှနျခွောကျ၊ ငါးပိ စတာတှေ) ကို ပွနျလညျအစားထိုး သုံးသငျ့ပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရှေးအစဉျအဆကျ ဘိုးဘှားမြားဟာ ထှားကြိုငျးသနျမာ ရောဂါကငျးခဲ့တာ အခြိုမှုနျ့ မစားခဲ့ကွတာလညျး ပါပါတယျ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on အချိုမှုန့်ကို ဘာနဲ့လုပ်ထားသလဲ
နတ်ဝင်ပူးကာ ရွှေအတုများတူးဖော်၍ ကျပ်သိန်း၃၀၀ လိမ်လည်ခဲ့သည်ဆိုသူကို အမှုဖွင့်
Posted on June 16, 2019 June 16, 2019 by SHANGYI
နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့နယ်၌ နတ်ဝင်ပူးကာ ရွှေထည်ပစ္စည်းအတုများ တူးဖော်၍ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ကျော် လိမ်လည်ရယူခဲ့သည်ဆိုသူ အမျိုးသမီးကို ဇွန် ၁၄ ရက်က အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ကံလှကျေးရွာနေ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် တိုင်တန်းသူအမျိုးသမီးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ မှစ၍ အနော်ရထာရပ်ကွက်နေ မခင်သက်နွယ်(ခ)မနွယ် (၄၃)နှစ် နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်မှစတင်၍ မခင်သက်နွယ်(ခ) မနွယ်က နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဘိုးဘွားပိုင်အမွေများ သိုက်များထံမှ ရမည်ဟု ပြောဆိုကာ ပွဲတော်ခ ကျပ် ၁ သိန်းခွဲကို တောင်းယူခဲ့သည်။
ထို့နောက် တိုင်တန်းသူပိုင် ယာကွက်အတွင်းသို့ တူးဖော်ရာ ရွှေလက်ကောက်များနှင့် ရွှေဆွဲကြိုးများ တူးဖော်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် မခင်သက်နွယ်(ခ)မနွယ်က နေအိမ်သို့အကြိမ်ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပြီး နတ်ပူး၍ နေအိမ်ရှိ ခြင်းများ၊ ဘုရားစင်ပေါ်တို့မှ ရွှေထည်များကို ရရှိစေခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တိုင်တန်းသူ ပိုင်ဆိုင်သည့် ယာကွက်အတွင်းတို့မှ ရွှေရောင် တဘက် ၁ ထည်၊ လိပ်ပြာပုံခါးပတ်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ပါရွှေရောင်ခါးပတ် ၃ ခု၊ ရွှေရောင် စလွယ် ၁ ခု၊ ရွှေရောင်ဘယက် ၂ ခု၊ ရွှေရောင်လင်ပန်း ၁ ချပ်၊ ရွှေရောင်ခေါင်ဖီး ၂ ခု၊ ရွှေဆွဲကြိုး ၁၉ ကုံး၊ ရွှေရောင်ဆံထိုး ၁ ခု၊ ရင်ထိုး ၁ ခု၊ ရွှေရာင်ဆံကုပ်ရောရာ ၇ ခု၊ ဆွဲသီး/ဆွဲပြား ၃၀ ခု၊ ကြေးခရား ၁ ခု၊ ရွှေလက်စွပ် ၄၅ ကွင်း၊ နားကွင်းရောရာ ၁၅ ခု၊ ဟန်းချိန်း ၇ ခု၊ လက်ပတ်နာရီ ၁ လုံး၊ လက်ကောက် ၁၆၀ ကွင်း၊ အရှင်သီဝလိပုံတော် ၁ ဆူ၊ ဘုရား ၂ ဆူ၊ လက်ဖွဲ့ကြိုး ၁ ခု၊ အလှူလုပ်ပါ စာတမ်းပါ သုံးထပ်သားပြား ၁ ခု၊ ပလတ်စတစ်ဗူး ၁ ဗူး၊ ဗမာဆေးမှုန့်ထုပ် ၈ ထုပ်တို့ကို အကြိမ် ၄၀ခန့် တူးဖော် ရရှိစေခဲ့သည်။
ယင်းသို့ တူးဖော်ခအဖြစ် ကျပ် ၃၀၀ သိန်းပေးခဲ့ရပြီး ယခု နှစ် ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် အဆိုပါရွှေထည်ပစ္စည်းများကို ရွှေဆိုင်၌ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ရွှေအတုများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်ဆိုကာ သက်ဆိုင်ရာသို့ ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် လာရောက် တိုင်ကြားခဲ့သည်။
ရွှေမြို့နယ်မြေရဲစခန်းက (ပ)၃၆၅/၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၂၀ အရ အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
Credit-The Myanmar Times
နတျဝငျပူးကာ ရှအေတုမြားတူးဖျော၍ ကပျြသိနျး၃၀၀ လိမျလညျခဲ့သညျဆိုသူကို အမှုဖှငျ့
နပွေညျတျော တပျကုနျးမွို့နယျ၌ နတျဝငျပူးကာ ရှထေညျပစ်စညျးအတုမြား တူးဖျော၍ ကပျြသိနျး ၃၀၀ ကြျော လိမျလညျရယူခဲ့သညျဆိုသူ အမြိုးသမီးကို ဇှနျ ၁၄ ရကျက အမှုဖှငျ့ စဈဆေးလကျြရှိသညျ။
တပျကုနျးမွို့နယျ၊ ကံလှကြေးရှာနေ အသကျ ၄၈ နှဈအရှယျ တိုငျတနျးသူအမြိုးသမီးသညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ မှစ၍ အနျောရထာရပျကှကျနေ မခငျသကျနှယျ(ခ)မနှယျ (၄၃)နှဈ နှငျ့ ခငျမငျရငျးနှီးခဲ့ ကွောငျး၊ စကျတငျဘာ ၁၅ ရကျမှစတငျ၍ မခငျသကျနှယျ(ခ) မနှယျက နအေိမျသို့ ရောကျရှိလာပွီး ဘိုးဘှားပိုငျအမှမြေား သိုကျမြားထံမှ ရမညျဟု ပွောဆိုကာ ပှဲတျောခ ကပျြ ၁ သိနျးခှဲကို တောငျးယူခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ တိုငျတနျးသူပိုငျ ယာကှကျအတှငျးသို့ တူးဖျောရာ ရှလေကျကောကျမြားနှငျ့ ရှဆှေဲကွိုးမြား တူးဖျောရရှိခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးနောကျ မခငျသကျနှယျ(ခ)မနှယျက နအေိမျသို့အကွိမျကွိမျ လာရောကျခဲ့ပွီး နတျပူး၍ နအေိမျရှိ ခွငျးမြား၊ ဘုရားစငျပျေါတို့မှ ရှထေညျမြားကို ရရှိစခေဲ့သညျ။
ထို့ပွငျ တိုငျတနျးသူ ပိုငျဆိုငျသညျ့ ယာကှကျအတှငျးတို့မှ ရှရေောငျ တဘကျ ၁ ထညျ၊ လိပျပွာပုံခါးပတျခေါငျးနှငျ့ ခြိတျပါရှရေောငျခါးပတျ ၃ ခု၊ ရှရေောငျ စလှယျ ၁ ခု၊ ရှရေောငျဘယကျ ၂ ခု၊ ရှရေောငျလငျပနျး ၁ ခပျြ၊ ရှရေောငျခေါငျဖီး ၂ ခု၊ ရှဆှေဲကွိုး ၁၉ ကုံး၊ ရှရေောငျဆံထိုး ၁ ခု၊ ရငျထိုး ၁ ခု၊ ရှရောငျဆံကုပျရောရာ ၇ ခု၊ ဆှဲသီး/ဆှဲပွား ၃၀ ခု၊ ကွေးခရား ၁ ခု၊ ရှလေကျစှပျ ၄၅ ကှငျး၊ နားကှငျးရောရာ ၁၅ ခု၊ ဟနျးခြိနျး ၇ ခု၊ လကျပတျနာရီ ၁ လုံး၊ လကျကောကျ ၁၆၀ ကှငျး၊ အရှငျသီဝလိပုံတျော ၁ ဆူ၊ ဘုရား ၂ ဆူ၊ လကျဖှဲ့ကွိုး ၁ ခု၊ အလှူလုပျပါ စာတမျးပါ သုံးထပျသားပွား ၁ ခု၊ ပလတျစတဈဗူး ၁ ဗူး၊ ဗမာဆေးမှုနျ့ထုပျ ၈ ထုပျတို့ကို အကွိမျ ၄၀ခနျ့ တူးဖျော ရရှိစခေဲ့သညျ။
ယငျးသို့ တူးဖျောခအဖွဈ ကပျြ ၃၀၀ သိနျးပေးခဲ့ရပွီး ယခု နှဈ ဇှနျ ၁၂ ရကျတှငျ အဆိုပါရှထေညျပစ်စညျးမြားကို ရှဆေိုငျ၌ စဈဆေးခဲ့ရာ ရှအေတုမြားဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျဆိုကာ သကျဆိုငျရာသို့ ဇှနျ ၁၄ ရကျတှငျ လာရောကျ တိုငျကွားခဲ့သညျ။
ရှမွေို့နယျမွရေဲစခနျးက (ပ)၃၆၅/၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၄၂၀ အရ အမှုဖှငျ့စဈဆေးလကျြရှိသညျ။
Posted in သတင်း LeaveaComment on နတ်ဝင်ပူးကာ ရွှေအတုများတူးဖော်၍ ကျပ်သိန်း၃၀၀ လိမ်လည်ခဲ့သည်ဆိုသူကို အမှုဖွင့်